सहकार्यमा विश्वास गरेर वातावरण सुधार्न तल्लीन छौँ ।
बुध, पौष २, २०७६
वातावरण संरक्षण र सुधारमा नागरिकको सहयोग र सक्रियता बढेको छ । वाग्मती नदी सफाइ अभियान सर्वत्र चर्चा रहेको अवस्थामा अहिले देशैभर सामाजिक अभियन्ताको अग्रसरतामा १०० भन्दा बढी स्थानमा सरसफाइ अभियान संचालनमा आएका छन् । अभियानसँगै संस्थागत रुपमा कानुनी धरातलमा बनाएर दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले काठमाडौको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा माकलबारी वातावरण समुह गठन भएको छ । स्थानीय सरकारले वातावरणका मुद्दालाई न्युन प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले मंसिर २८ मा एक कार्यक्रम गरि समुहलाई कार्यदेश प्रदान गरेको छ । माकलबारी क्षेत्रका स्थानीय बिनित अर्यालको अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समुहले गर्ने काम र वातावरणीय क्षेत्रमा हुने सुधारका सम्बन्धमा ईकोसमाचारले अध्यक्ष अर्यालसगँ गरेको संवादको सम्पादित अंश ।
यहाँलाई बधाई छ ।
माकलबारी वातावरण समुहको गठन रहर कि निश्चित कार्यदेश छ ?
हेर्नुस वातावरण संरक्षण तथा नदी सरसफाइको अभियानमा सहभागी हुदैँ नागरिकमा चेतनामुलक अभियान संचालन गरेको करिब २ दशक भयो । म स्वयं शैक्षिक क्षेत्रसगँ आवद्ध रहेकाले त्यसबाट पनि धेरै विद्यार्थी भाई बहिनीलाई यस विषयमा जानकारी गराई रहेको छु । संस्था गठन रहर पक्कै होईन । हाम्रो समुदायका धेरै साथीहरु पहिलेदेखिनै काम गरिरहेका छौँ । हाल स्थानीय सरकारसगँ सहकार्य र सहयोग गर्न कानुनी आधार आवश्यक रहेकाले समुहको गठन भएको हो । स्थानीय सरकारले दिईएको कार्यदेश अनुसार अघि बढ्छौँ ।
बधाई त धेरै आए होलान् तर जीम्मेवारीको महसुस कत्तिको हुन्छ ?
सामाजिक काम सबैको सहकार्य विना सम्भव छैन । स्वभाविक रुपले साथी भाईहरुले बधाई त दिनुभएको छ । म, मेरा सबै समितिका साथीहरुले संस्थाको निश्चित उद्देश्य तय गरेर तीन वर्षे कार्यकालमा वातावरण, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न क्रियाशिल रहनेछु । हामीले यस्तै प्रकेतिका काम धेरै गरेका छौँ अब यसलाई थप परिस्किृत गर्दै लैजाने आधार तय भएकाले जहाँसम्म स्थानीय सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छौ ।
वातावरणीय क्षेत्र आफैमा व्यापक छ, कस्ता कामले प्राथमिकता पाउछन् ?
हामीले स्थानीय सरकारसगँ सहकार्य गरेर वर्षातको पानी जम्मा गर्ने , प्लास्टिकका झोलालाई नगर क्षेत्रका सबै सरकारी कार्यलयबाट कपडाको झोलाले विस्थापन गर्ने, कुहिने फोहरबाट मल बनाउने, सडक तथा नदी किनारमा वृक्षरोपण कार्य र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनेछौँ । यो समुदायका सबै नागरिकको सल्लाह र सहयोगनै हाम्रो आत्मविश्वास र कार्य प्रारम्भ गर्ने आधार भएकाले यसमा सफल हुने विश्वास लिएको छु ।
तपाईले उल्लेख गरेका काम सुनिरहेकै ‘सामान्य विषयजस्तो लाग्छन् नि ?
हेर्नुहोस् । वातावरणका धेरै मुद्दा शहरकेन्द्रित नगरपालिकामा समानजस्तै लाग्छन् । मैले उल्लेख गरेका विषय सुन्दा वा सुनाउदा सामान्य हुन् तर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन र सफल गराउन धेरै मेहेनत र गृहकार्य आवश्यक छ । उदाहरणका लागि करिब ५ ७ वर्ष अघिसम्म हाम्रो धेरै स्थानमा १५ देखि २० फुट खन्दा पानी निस्कन्थ्यो तर अहिलो त्यसकै लागि ५० फुट भन्दा बढी खन्नु पर्ने देखिएको छ । अब भन्नुहोस् वर्षातको पानी सबै घरले ढलमा हाल्दै जाने हो भने अबको ५ वर्षपछि पानीको अभाव कत्ति भयावह होला । त्यसैले सक्रिय रुपमा कार्य गर्ने युवा साथीहरुको जमात र उर्जाले हामी पहिलो चरणमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको ४ र ८ नं वडाका करिब १२ सय घरमा वर्षातको पानी संकलन गर्ने व्यवस्था गर्दैछौ ।
यस्ता कार्यक्रम अन्य नगरपालिकामा विभिन्न परियोजनाले धेरै संचालन गरेका र केहि वर्षमै बन्द भएका प्रशस्त उदाहरण छन् यहाँ पनि यस्तै त होला होईन् ?
माकलबारी वातावरण समुह कुने विकास साझेदारी संस्थाको सहयोगमा परियोजना लागु गर्न स्थापना भएको होईन् । हो धेरै स्थानमा यस्ता अभियान बन्द पनि भएका छन् तर हामी स्थानीय सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान र स्वयं घरधनीको ५० प्रतिशत लगानीमा यो कार्यक्रम अघि बढाउन खोजीरहेका छौँ । मानिसलाई बुझाउन केहि समय त लाग्ला तर यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकै सफल अभियान हुनेछ । हाम्रै पैसाले हामी काम गरिरहेकाले म सबैको सहयोग प्राप्त हुने कुरामा विश्वस्त छु । स्थानीयस्तरमा निश्चित मापदण्ड बनाई अनुगमन समेत गर्नेछौँ ।
स्थानीय सरकारको सहयोग कि औपचारिकता मात्रै हो ?
यस समुह गठनमा स्थानीय सरकार र विशेषगरि नगर प्रमुख सन्तोष चालिसे तथा अन्य जनप्रतिनिधिप्रति विशष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । तत्काललका लागि उहाँहरुले काम गर्ने हौसला सहित ४ लाख रकम विनियोजन गरिदिनुभएको छ । यो रकम आफैमा धेरै नहोला तर यसले जुन उर्जा र ‘सकारात्मक सोच पैदा गरेको छ त्यसको मापन हुन सक्दैन । कार्यक्रम र समुदायको मागको आधारमा अन्य थप बजेट विनियोजन हुने प्रतिवद्धता आएको छ ।
यहाँलाई जानकारी गरौँ हामी धेरै रकम खर्च हुने कार्यक्रम भन्दा पनि वातावरणका क्षेत्रमा प्रभावकारी देखिने कार्यक्रमलाई विशेष ध्यान दिईरहेका छौँ । म यहाँको संचार माध्यम मार्फत नियमित सल्लाह तथा संभालन भएका कार्यक्रम स्वस्फूर्त रुपमा अनुगमन गरिदिन सबैमा आग्रह गर्छु ।
नागरिकले त हरेक कुरा तत्काल अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् के के सम्भव होला तीन वर्षको अवधीमा ?
नागरिकमा विकास वा परिवर्तनको अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो । हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ हो भन्दा यी वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वृक्षरोपणजस्ता विषय एक पटक गरेर सम्पन्न हुने प्रकृतिका पूर्वाधार विकासजस्ता होईनन् । यसमा नागरिकको सहयोग पहिले सोच अनि व्यवहार परिवर्तन अत्यावश्यक रहन्छ । उहाँलाई थाहैछ हाम्रो व्इवहार आजको भालि परिवर्तन हुने कुरन होईनन् । सबैले आफु व्यक्ति वा समुदायको सहस्य बनेर वातावरण समुहलाई सक्रिय रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा वातावरणीय हिसावले व्यापक सुधार गर्ने सपना देखेका छौँ र यो पूरा हुनेमा आशावादी छु ।
नागरिकसँग केहि अपेक्षा वा आग्रह छ ?
अवश्य छ नि । हामी सोच परिवर्तको शुरुवाती क्षण पार गर्दै व्यवहार परिवर्तन तर्फ बढीरहेका छौँ । स्थानीय सरकारको सहयोग र नागरिकका अपेक्षालाई आत्मसाथ गर्दै यो सामुहिक रुपमा गरिने कार्य हो । सफा वातावरण, स्वच्छ वायु, व्यक्तिको स्वास्थ्य संसारको कुनैपनि धनले आर्जन गर्न सकिदैन । त्यसैले वातावरण वा पृथ्वी पुर्खाको नासो पुस्तालाई हस्तातरण गर्ने प्राकृतिक नियम हो । यसका लागि वातावरणीय तत्वको गुणस्तर खस्कन दिनुहुदैन । म सबै नगरवासीलाई माकलबारी वातावरण समुहका हरेक काममा सहयोग गर्न, रचनात्मक टिप्पणी गर्दै सफा र हराभरा नगर निर्माणमा संलग्न हुन आग्रह गर्दछु । यहाँहरुको सहयोगबिना हामीले संयुक्त रुपमा देखेका कुनेपनि सपना पूरा हुदैनन् त्यसैलाई आजकै मितिदेखि पहिले सोच र तत्पश्चात व्यवहार परिवर्तन गर्ने प्रण गरौँ भन्न चाहन्छु ।